Nutrition Facts | Ensure
ကူးစက်ရောဂါတွေကနေ ပြန်လည်သက်သာလာချိန်မှာ မှီဝဲသင့်တဲ့ အစားအစာ ၇ မျိုး
ကူးစက်ရောဂါတွေကနေ ပြန်လည်သက်သာလာချိန်မှာ မှီဝဲသင့်တဲ့ အစားအစာ ၇ မျိုး ကူးစက်ရောဂါဆိုတာက ဗိုင်းရပ်စ်တွေ၊ ဘက်တီးရီးယားတွေ၊ မှိုတွေ၊ ပါရာဆိုက်တွေကနေတဆင့် ကူးစပ်ကပ်ငြိပြီး ဖြစ်ပွားတဲ့ရောဂါတွေပါ။ အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ ပြင်းထန်ကူးစက်ရောဂါတွေကစလို့ တုပ်ကွေး၊ ငှက်ဖျား၊ ရိုးရိုးအဖျားနဲ့ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောတွေဟာလည်း ကူးစက်ရောဂါအမျိုးအစားတွေပါပဲ။ […]
Under : အာဟာရဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
ဘိုးဘိုးဘွားဘွားတွေအတွက် ခုခံအားကို ဘယ်လို မြှင့်တင်မလဲ။
ဘိုးဘိုးဘွားဘွားတွေအတွက် ခုခံအားကို ဘယ်လို မြှင့်တင်မလဲ။ ငယ်ငယ်တည်းက ကိုယ့်ကို ထိန်းကျောင်းလာခဲ့တဲ့ ဘိုးဘိုးဘွားဘွားတွေဟာ ခုဆို အားအင်လျော့နည်းလာပါပြီ။ ကိုယ်တွေက တစ်လှည့် ပြန်စောင့်ရှောက်ပေးရမယ့်အလှည့် ရောက်လာပါပြီ။ အထူးသဖြင့် ကျန်းမာရေးပေါ့။ ဘိုးဘိုးဘွားဘွားတွေ ရောဂါတွေဖြစ်၊ အိပ်ရာထဲမှာ လဲမနေဘဲ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ကိုယ့်နားမှာ ရှိနေနိုင်တာလည်း […]
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခုခံအားနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်ဘယ်လောက် သိထားလဲ။ ခုခံအား တက်အောင် ဘာလုပ်ကြမလဲ။ ခုလို ရောဂါပိုး အသစ်တွေ ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ “ခုခံအား ကောင်းအောင်နေ” ဆိုတဲ့ စကားလေး မကြာမကြာ ကြားလာရပါတယ်။ ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ ရောဂါပိုးတစ်ခုဝင်လာရင် ခုခံအားကပဲ တိုက်ထုတ်ပေးတာပါ။ ရောဂါပိုးတွေ ဝင်မလာအောင်လည်း ခုခံအားကပဲ ကာကွယ်ပေးတာပါ။ […]
စွမ်းအားပြည့်တဲ့ ကိုယ်ခံအားအတွက် ပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့ အာဟာရဓာတ် လူတစ်ယောက် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်ဖို့ဆိုရင် ကိုယ်ခံအားကောင်းဖို့က မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားစနစ်က စွမ်းရည်ပြည့်ဝနေမယ်ဆိုရင် ရောဂါအမျိုးမျိုးကို တွန်းလှန်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်က ကျန်းကျန်းမာမာရှိနေမယ်။ ကိုယ်ခံအားစနစ်က မကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ […]
ပြင်းထန်ဆိုးရွားတဲ့ ရောဂါပိုးတွေရန်ကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း
ပြင်းထန်ဆိုးရွားတဲ့ ရောဂါပိုးတွေရန်ကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ရောဂါပိုးတွေ ရန်ကနေ ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ? ဒီမေးခွန်းကို လူတိုင်း ဖြေတတ်မှာပဲပေါ့။ ကိုယ်ခံအား ကောင်းအောင် နေပါလို့လေ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင် ဘာလုပ်ရမှာလဲ ရော သေချာသိကြပြီးပြီလား။ ကိုယ်ခံအားကောင်းစေဖို့ ဂရုစိုက်ပေးရမယ့် အချက်တွေ ရှိနေပါတယ်နော်။ […]
ပရိုတင်းက ဘာကြောင့်အရေးပါသလဲ? ပရိုတင်းပါဝင်သော အာဟာရသည် အမျိုးသားနှင့် အမျိူးသမီးအားလုံးတို့ရဲ့ ကြွက်သားတည်ဆောက်မှုများ နှင့်ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အားကစားသမားများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများမှာလည်း ပရိုတင်းဓာတ် များပို၍လိုအပ်သည်ကို သင်သိပါသလား? လူတစ်ယောက်အရွယ်ရောက်လာသည်နှင့်အမျှ လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေလည်း […]
သင့်တော်သောအာဟာရကို ဟန့်တားစေသောအသက်အရွယ်နှင့်ဆိုင်သော စိန်ခေါ်မှုများ
သင့်တော်သောအာဟာရကို ဟန့်တားစေသောအသက်အရွယ်နှင့်ဆိုင်သော စိန်ခေါ်မှုများ သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် အာဟာရကျန်းမာရေးသည် အလွန်အရေးကြီးလှပါတယ်။ အာဟာရပြည့်ဝမှ ရောဂါများကို တိုက်ဖြတ်နိုင်ပြီး ဖျားနာခြင်း ဒါမှမဟုတ် ခွဲစိတ်ကုသပြီးနာလန် ပြန်ထူခြင်း နှင့် ကျန်းမာသောဘဝကို ဖြတ်သန်းနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ယောက်ရဲ့ […]
Vitamin B က ဦးနှောက်ယိုယွင်းခြင်းကို ဘယ်လိုကာကွယ်အကျိုးပြုသလဲ?
Vitamin B က ဦးနှောက်ယိုယွင်းခြင်းကို ဘယ်လိုကာကွယ်အကျိုးပြုသလဲ? ဦးနှောက်သည်လူ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာ အကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပေမယ့် စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံး အချက်ကတော့ စွမ်းအင်အများဆုံး အသုံးပြုတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်ရဲ့အလေးချိန်ဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်စုစုပေါင်းရဲ့ ၂% လောက်သာရှိပေမယ့် စွမ်းအင် အသုံးပြုမှုကတော့ […]
ငယ်ငယ်တည်းက ကိုယ့်ကို ထိန်းကျောင်းလာခဲ့တဲ့ ဘိုးဘိုးဘွားဘွားတွေဟာ ခုဆို အားအင်လျော့နည်းလာပါပြီ။ ကိုယ်တွေက တစ်လှည့် ပြန်စောင့်ရှောက်ပေးရမယ့်အလှည့် ရောက်လာပါပြီ။ အထူးသဖြင့် ကျန်းမာရေးပေါ့။ ဘိုးဘိုးဘွားဘွားတွေ ရောဂါတွေဖြစ်၊ အိပ်ရာထဲမှာ လဲမနေဘဲ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ကိုယ့်နားမှာ ရှိနေနိုင်တာလည်း ပျော်စရာ တစ်ခုပါပဲ။ ခုတလောမှာတော့ ရောဂါပိုး အသစ်အဆန်းတွေ ဖြစ်နေတာကြောင့် ဘိုးဘိုးဘွားဘွားတွေအတွက် […]
Under : အာဟာရဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
ခုခံအား တက်အောင် ဘာလုပ်ကြမလဲ။ ခုလို ရောဂါပိုး အသစ်တွေ ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ “ခုခံအား ကောင်းအောင်နေ” ဆိုတဲ့ စကားလေး မကြာမကြာ ကြားလာရပါတယ်။ ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ ရောဂါပိုးတစ်ခုဝင်လာရင် ခုခံအားကပဲ တိုက်ထုတ်ပေးတာပါ။ ရောဂါပိုးတွေ ဝင်မလာအောင်လည်း ခုခံအားကပဲ ကာကွယ်ပေးတာပါ။ ဒါကြောင့် ခုခံအား ကောင်းအောင်နေလို့ ပြောကြတာပေါ့။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ […]
လူတစ်ယောက် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်ဖို့ဆိုရင် ကိုယ်ခံအားကောင်းဖို့က မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားစနစ်က စွမ်းရည်ပြည့်ဝနေမယ်ဆိုရင် ရောဂါအမျိုးမျိုးကို တွန်းလှန်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်က ကျန်းကျန်းမာမာရှိနေမယ်။ ကိုယ်ခံအားစနစ်က မကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ ရောဂါပိုးအမျိုးမျိုး ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ဝင်ရောက်လာပြီး မကြာန်းမာမာရှိနေမယ်ခဏဖျားနာ နေမကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ အခုလို ရောဂါအမျိုးမျိုး ပေါ်ထွက်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် ကိုယ်ခံအားစနစ် စွမ်းအားပြည့်ဝနေဖို့က မဖြစ်မနေကို လိုအပ်တာပေါ့။ […]
ပရိုတင်းက ဘာကြောင့်အရေးပါသလဲ? ပရိုတင်းပါဝင်သော အာဟာရသည် အမျိုးသားနှင့် အမျိူးသမီးအားလုံးတို့ရဲ့ ကြွက်သားတည်ဆောက်မှုများ နှင့်ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အားကစားသမားများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများမှာလည်း ပရိုတင်းဓာတ် များပို၍လိုအပ်သည်ကို သင်သိပါသလား? လူတစ်ယောက်အရွယ်ရောက်လာသည်နှင့်အမျှ လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေလည်းပြောင်းလဲလာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြောင်းလဲလာတဲ့ ပုံစံနဲ့ ချိန်ညှိစားသောက်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။ အဓိကအကြောင်းအရင်းကတော့ လူတစ်ဦး၏ ကြွက်သား ကျဆင်းခြင်းနှင့် သဘာဝအလျောက်ဖြစ်လာတဲ့ အိုမင်းခြင်းကြောင့် မလိုလားအပ်တဲ့ အရိုးများဆုံးရှုံးခြင်းတို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးဆက်ကတော့ […]
သင့်တော်သောအာဟာရကို ဟန့်တားစေသောအသက်အရွယ်နှင့်ဆိုင်သော စိန်ခေါ်မှုများ သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် အာဟာရကျန်းမာရေးသည် အလွန်အရေးကြီးလှပါတယ်။ အာဟာရပြည့်ဝမှ ရောဂါများကို တိုက်ဖြတ်နိုင်ပြီး ဖျားနာခြင်း ဒါမှမဟုတ် ခွဲစိတ်ကုသပြီးနာလန် ပြန်ထူခြင်း နှင့် ကျန်းမာသောဘဝကို ဖြတ်သန်းနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ယောက်ရဲ့ ကျန်းကျန်းမာမာနှင့် အာဟာရပြည့်ဝစေဖို့ စားလိုက်တဲ့အစားအစာနဲ့ အာဟာရကြား အကျိုးသက်ရောက်စေသော အချက်များစွာရှိပါတယ်။ လူတစ်ဦးရဲ့ အာဟာရဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ၊ သောက်သုံးတဲ့ ဆေးဝါး၊ လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်း၊ စောင့်ရှောက်ပေးသူများနှင့် […]
Vitamin B က ဦးနှောက်ယိုယွင်းခြင်းကို ဘယ်လိုကာကွယ်အကျိုးပြုသလဲ? ဦးနှောက်သည်လူ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာ အကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပေမယ့် စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံး အချက်ကတော့ စွမ်းအင်အများဆုံး အသုံးပြုတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်ရဲ့အလေးချိန်ဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်စုစုပေါင်းရဲ့ ၂% လောက်သာရှိပေမယ့် စွမ်းအင် အသုံးပြုမှုကတော့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးစာရဲ့ ၂၀% လောက်အသုံးပြုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဦးနှောက် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် မှန်ကန်တဲ့အစာအဟာရ ကိုစားသောက်ပေးဖို့ […]
ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်သော ပညာပေး ဗွီဒီယိုများ
ဗွီဒီယိုတေ ကြည့်ရန် ဒီကိုနှိပ်ပါ